Saraakiil ka tirsan Xafiiska Midowga Yurub ee Soomaaliya oo laga helay Coronavirus | XORRIYA NEWS
Home Wararka Saraakiil ka tirsan Xafiiska Midowga Yurub ee Soomaaliya oo laga helay Coronavirus
Saraakiil ka tirsan Xafiiska Midowga Yurub ee Soomaaliya oo laga helay Coronavirus
Xafiiska Midowga Yurub ee Soomaaliya ayaa shaaciyay in 3 xubnood oo ka mid ah xafiiskaas laga helay cudurka Coronavirus, taasoo noqoneysa markii u horeysay oo saraakiil sarsare oo ka tirsan xafiis maqaamkiisa sareeyo laga helo xanuunkaani.
Wakiilka Midowga Yurub u qaabilsan Soomaaliya Nicholas Berlanga ayaa sheegay in saddex xubnood oo xafiiskooda ka tirsan la karantiilay, lana geeyay meel gaar ah oo lagu xanaaneeyo.
Mr Berlanga ayaa sheegay in saddexdaas xubnood lala tacaalayo xaaladooda caafimaad, sidoo kale waxaa uu xusay in la karantiilay dadkii ay la kulmeen ama ay la xiriireen.
Sidoo kale Wakiilka ayaa sheegay inay qaadan doonaan tallaabooyinka ay soo saartay Hey’adda Caafimaadka adduunka ee lagu badbaadinayo dadka qaba cudurkan iyo shaqaalaha kale ee Xafiiska Midowga Yurub.
Xarunta Xalane oo ay saldhig ku leeyihiin Ciidamada AMISOM iyo Safaaradaha shisheeye ayaa dhowaanahan waxaa laga helay kiisas ku saabsan Covid-19, waxaana horay looga helay shaqaale ka tirsan Xafiiska Qaramada Midoobey, sidoo kale askari ka tirsan AMISOM oo ka socda Uganda ayaa isagana laga helay cudurkan.
Xanuunka COVID-19 ayaa beryahii dambe aad u faafayay magaalada Muqdisho iyo gabi ahaan ba Soomaaliya sida ay xaqiijisaday Wasaaradda Caafimaadka ayaa tirada guud uu soo ritay cudurkaani kor u dhaafeysaa 600 oo xaaladood.